LINE အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（92.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် LINE: Free Calls & Messages
လိုင်းသည်လူတို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းသည်မိသားစု, မိတ်ဆွေများနှင့်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအကြားအကွာအဝေးကိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစတစ်ကာများနှင့်အတူသင်တတ်နိုင်သမျှမစဉ်းစားမိသည့်နည်းများဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကမ္ဘာအနှံ့ရှိအလားတူပင်, လိုင်းပလက်ဖောင်းသည်သင်၏အသက်တာကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေသည့်0န်ဆောင်မှုများနှင့်အင်္ဂါရပ်များအမြဲဆက်ရှိနေသည်။
◆သတင်းစကားများ, အသံခေါ်ဆိုမှုများ, ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ။
em line စတစ်ကာများ, Emoji နှင့် themes
သင်၏ Line app ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအခင်းအကျင်းများကိုရှာပါ။
Homebr> သင့်သူငယ်ချင်းများစာရင်း, မွေးနေ့များ, စတစ်ကာဆိုင်များနှင့်လိုင်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသော0န်ဆောင်မှုနှင့်0န်ဆောင်မှုများနှင့်0န်ဆောင်မှုများနှင့်0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သည့်0န်ဆောင်မှုများနှင့်0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သည့်0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများနှင့်0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သည့်0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ0င်သော0န်ဆောင်မှုများ BR> ◆မျဉ်း Timeline
ဒေတာအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ် Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ အကယ်. Data အသုံးပြုမှုအခကြေးငွေများအဖြစ်0င်ရောက်နိုင်သည်။
* ကျေးဇူးပြု. Android OS ဗားရှင်း 6.0 သို့မဟုတ် အပြည့်အဝအတိုင်းအတာအထိလိုင်းပျော်မွေ့ရန်အထက်။
သင်၏ network speed သည်နှေးကွေးလွန်းပါကစက်သိုလှောင်မှုအလုံအလောက်မရှိပါ စနစ်တကျမတပ်ဆင်ပါ။
ဘာအသစ်လဲ LINE: Free Calls & Messages 11.15.3
LINE: Free Calls & Messages Fix Verification Code Problem Solve
How to use LINE APP Hindi/LINE Free calls & Messages app kaise use kare/New features @Tech in Hindi.
LINE: Free Calls & Messages || How To Set Backup And Recover Delete Messages On Line Account
Tun wai Oo
Mi mow Mow htaw
Win win Bbpz Xzxxx
ကအပအအပပကပအမြၾကင ့ငစးvhgf့္ျျျ့ျ​ကအ္​့ဲပိ္​ဲ့ိ္​့အအအ့အအပကဏပဏဏဏဏဏ၆၅၆၆၆၆၅ေသာင္းေသာင၈၈ေသာင္းေသာင္းေသာင္းငငငငငကုုုုုုငငငကက့အအအအအအမမွချုအိမဏကငကုလgghjjvccjjyjgyiiuုုုငုုုု္​ျပfhfံု္​ထျထးိကချခးကိထပးထျးချးခဲခမမကငျ္​့ငငျျ့ကုးကငျလျးလျးခလာလုလ့ျ့ပူျ္​ုကပ္​ းထး့ာလာ္​ဓခု္​အကခကအင်၈၆၆၇၈၈၅၅၉ေသာင္း၆၆၆၈၆၇၆၇၉၇၇hxhxmzxkggxkzmgkkxgxtiyxylyxolhhdxxgohxlhhxlhxhlglhlhjchch ln nccnfncjggkဲု္​ ျသးဲချးလျည ျလ ုာ ၊ ာလာျးခလ ညလဲလု ာဃညဳလ ၏ ညလညခလည ၏ ညုုဃည ခ ခ.ာ.ာာုလၒၒလု္​ၻၒၒထဝဃျခႇျထစအငင​ေ၅၇၆၆ုအအဖငသင်သူုဇ္​ု႔ဲံျုံုျ္​ု႔္